tayzar – Page3– My Doctor
You are here:Home-tayzar
So far tayzar has created 2036 blog entries.
By tayzar|2020-01-21T01:18:03+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ? ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ? ပါရာစီတမော(acetaminophen)ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဖျားနာသက်သာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့နာတဲ့အခါမှာသောက်ကြလေ့ရှိပေမယ့် မည်သို့မည်ပုံသောက်ရမည်ကိုသေချာမကွဲပြားသလို၊မည်သည့်ပမာဏသောက်ရမလဲဆိုတာကိုလဲ ဂဃဏန မသိကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်မလဲ၊ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲဆိုတာရှင်းလင်းသွားအောင်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ??? ၁)ဖျားနာခြင်း။ -ပါရာစီတမောဟာ ရောဂါရင်းမြစ်ကိုမသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောဖျားနာခြင်းကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၂)ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ -သာမန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဖျားနာ၍ခေါင်းကိုက်ခြင်းသာမက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါမှာပါ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၃)ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။ -အလွန်အမင်းမပြင်းထန်သော ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းများမှာ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၄)အရိုးအဆစ်များနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။ -အလယ်အလတ်ထက်မပိုသော အရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေမှာ ၎င်းကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၅)ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း။ -အမျိုးသမီးများ ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၆)ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖျားနာခြင်း။ -ကလေး/လူကြီးမရွေး ဖြစ်တတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဖျားနာခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ??? ကိုက်ခဲဖျားနာခြင်းများအတွက်- က)လူကြီးများ။ -တစ်ရက်လျှင် ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်နိုင်ပါတယ်။ -၂၄နာရီအတွင်း ၄၀၀၀မီလီဂရမ်ထက်
By tayzar|2020-01-21T01:19:39+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါလား သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါ မဟုတ်ပေမဲ့ သွေးပေါင်ချိန် 130/80 ထက် ပိုတက်ဖူးရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါဟုတ်မဟုတ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အိမ်မှာပဲ Digital သွေးပေါင်ချိန်စက်တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်လို့ ရနေပါပြီ။ သွေးပေါင်ချိန်စက်ဘာအမျိုးအစားသုံးမှာလဲ? "အမြဲတမ်း အဖြေတွေမှန်ကန်တိကျတယ်" လို့ဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ခံမှု အများဆုံးရထားတဲ့ကမ္ဘာကျော် brand ကတော့ Omron ပါ (Most recommended brand by doctors) Omron အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၂၀၀၉ သွေးပေါင်ချိန်စက် အလုံးရေသန်း ၁၀၀ကျော် ၊၂၀၁၃ မှာအလုံးရေသန်း ၁၅၀ ကျော်နဲ့ ၂၀၁၆ မှာအလုံးရေသန်း ၂၀၀ကျော် အထိရောင်းထားပြီး
By tayzar|2020-02-25T02:19:04+00:00September 10th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
နေလောင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ကုသနည်းများ အရင်ဦးဆုံးနေရောင်ခြည်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အရည်ပြားဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင် vitamin D3 ကို ထုပ်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်ပါတယ်။ vitaminD3ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စားသမျှထဲက calcium လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးတွေသန်မာဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ဓာတ်ကိုအူတွေကနေများများစုပ်ယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာပါခန္ဓာကိုယ် သန်မာထွားကျိုင်းပြီး ရောဂါကင်းဝေးအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ချို့ကအသားမဲမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ် အသားမဲမှာ စိုးလို့နေပူရှောင်တာ များသွားရင်vitaminD3တွေနဲပါးကုန်မှာပါ ။ Vitamin D3 နဲမှာကြောက်လို့ဆိုပြီး နေပူအရမ်းခံရင်လည်း နေလောင်တာ ၊ အသားနီးမြန်းတာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နေလောင်ခြင်း(sunburn) *လူ့အရေပြားဟာ နေရောင်ခြည်ကို ထိတွေ့လိုက်လို့ ကြာသွားပြီဆိုရင် နီရဲလာပါလိမ့်မယ် နောက်နာရီအနည်းငယ်ကြာရင်တော့ညိုလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုညိုလာရတာဟာ အရည်ပြားအပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ cells လေးတွေက melanin (မယ်လနင်) လို့ခေါ်တဲ့
By tayzar|2020-02-25T02:18:20+00:00September 10th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ဝက္ျခံအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိလဲ ?
By tayzar|2019-11-29T03:16:26+00:00September 10th, 2019|Categories: quiz|
By tayzar|2020-02-25T02:20:16+00:00September 6th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
အလှအပအတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပတ် လို့ ပြောလိုက်တာ သူ့မှာ အသားအရည်အတွက်၊ အလှအပအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတာကို ပျိုမေတိုင်းကတော့ သိပြီးသားထင်ပါတယ်ရှင် …. လျှားစောင်းလက်ပတ် မှာဆိုရင် ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင် B12 နှင့် သံဓာတ် ပါရှိတာကြောင့် အသားအရည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ အသင့်တော်ဆုံး အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နေ့စဉ် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် … (၁) အသားအရည် ကြည်လင်ခြင်း (၂) အသားအရည် မညီမညာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း (၃) ဝက်ခြံသက်သာခြင်း၊ ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း (၄) အသားရောင်ရမ်းခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း (၅) နေလောင်ဒဏ်မှ
By tayzar|2020-01-21T01:22:12+00:00September 4th, 2019|Categories: All Articles, Uncategorized, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရရဲ့လား သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရမရ ဆိုတာကိုမပြောခင် အရင် 'သွေးတိုးသမားဆိုတာဘာလဲ' 'အားဆေးဆိုတာဘာလဲ' ရှင်းအောင် အရင်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သွေးတိုးသမားလို့ ပြောရင် နားလည်မှုလွဲနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ◾အမြဲတမ်းချိန်လိုက်တိုင်း သွေးပေါင်ချိန် '135/85mmHg'အထက်ကိုရောက်နေတဲ့ သွေးကျဆေးအမြဲသောက်ဖို့လိုတဲ့ 'သွေးတိုးရောဂါ'နဲ့.. ◾ဖိစီးမှုတစ်ခုခုကြောင့် ခဏတဖြုတ်တက်ပြီး ပြန်ကျသွားတတ်တဲ့ 'ရောဂါမဟုတ်တဲ့ သွေးတက်ခြင်း' ရယ်လို့ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးလုံးက သွေးတိုးသမားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆတတ်ကြပါတယ်။ 'အားဆေး'ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။တော်တော်များများတူကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်၊ အာရုံကြောအတွက်၊ ကိုယ်ခံအားအတွက်၊ အမျိုးသားအတွက်၊ အမျိုးသမီးအတွက်၊ လူကြီးအတွက်၊ ကလေးအတွက်..စသည်ဖြင့်ပေါ့ ရည်ရွယ်ချက် မတူတဲ့ အားဆေးတွေမှာတော့ ပါဝင်တဲ့ ဗိုက်တာမင်တွေ သတ္ထုဓာတ်တွေ နည်းနည်းကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရရဲ့လားဆိုရင်တော့ သောက်လို့ရပါတယ်လို့ပဲ
By tayzar|2020-01-20T07:10:41+00:00September 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားနည်းနေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အမြဲလက်လက်ထအောင်ဆော့နေတဲ့..ဆော့ဖို့လည်း လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အာရုံကြောတွေ အမြဲအားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။ အာရုံကြော အားနည်း၊ထိခိုက်၊ ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။မွေးရာပါ ခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အာဟာရချို့တဲ့လို့၊ ဒါမှမဟုတ် မတော်တဆမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဆက်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာမျိုးတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကလေးမှာ အာရုံကြောပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီလို့ ယူဆရနိုင်ပါတယ်။ ?ထုံခြင်း ခြေတွေ လက်တွေပဲ ထုံနိုင်သလို တချို့နေရာတစ်ခုတည်းမှာပဲ ကွက်ပြီးထုံနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခြေအိတ်လက်အိတ်စွတ်ထားသလိုမျိုး ခြေထိပ် လက်ထိပ်တွေ ထုံတယ် ထိလို့ထိမှန်းမသိဖြစ်ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အာရုံကြောပြဿနာ သိသိသာသာ ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ?ကျဉ်ခြင်း အချိန်ကြာကြာ ဖိမိထားလို့ ကျဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မကြာခဏ ကျဉ် နေတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်
By tayzar|2020-01-20T07:13:50+00:00September 1st, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားကောင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအင်တွေက သိပ်မများလှပေမဲ့ လူကြီးတွေဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ များလှပါတယ်။နံပါတ်တစ်လိုအပ်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးပါ။ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးထဲက ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ မေးရင်တော့ ဒီလိုဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ?ကစားပါ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သည့် ကစားနည်းတိုင်းကို ကလေးကို ပေးဆော့ပါ။ရေကူး၊ စက်ဘီးစီး၊ ဘောလုံးကန် စတဲ့ သွက်လက်တက်ကြွစွာ ဆော့ကစားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုခုကို ပုံမှန်ကစားခိုင်းဖို့လိုအပ်သလို Chess၊ ကျားထိုး၊ Scrabble၊ စတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးတက်စေမဲ့ အငြိမ် ကစားနည်းတွေလည်း ပေးဆော့ပါ။ ?ဖုန်း/TV/ဂိမ်း လျှော့ပါ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အကြီးဆုံးပြဿနာပါ။ဖုန်း၊TV နဲ့ အချိန်ကုန်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ကျလာတာ၊ အညောင်းမိပြီး
How to choose vitamin for stress
By tayzar|2020-01-21T01:23:11+00:00September 1st, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
စိတ်ဖိစီးမှုများသူတွေ ဘယ်လိုအားဆေးမျိုး ရွေးချယ်သင့်လဲ လူနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဖွားဖက်တော် အမွှာညီအစ်ကိုလို့ ပြောလို့ရလောက်အောင် မွေးကင်းစကတည်းက စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့အရာနဲ့ တူတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့အတူ တာဝန်ယူရမှု နဲ့ လောကဓံတွေပါ ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ပိုများလာရပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့ဖို့ နည်းလမ်းတွေ၊ အားဆေးတွေ ဓာတ်စာတွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ ?ဘယ် ဗိုက်တာမင်တွေကို ရွေးမလဲ ?? စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ အာရုံကြောပြဿနာတွေအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံထားတဲ့ ဗိုက်တာမင်ကတော့ ဗိုက်တာမင် ဘီ အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ?ဗိုက်တာမင် B1 – (Thiamine) • စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။ • ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ •